Faah faahin:- Nin looga shakiyay inuu qarax ku waday gaari oo lagu toogtay degmada Wadajir – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nin looga shakiyay inuu qarax ku waday gaari oo lagu toogtay degmada Wadajir
Wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Danwadaagta ee degmada Wadajir ayaa sheegaya in saakay halkaasi lagu toogtay nin waday gaari looga shakiyay inuu qarax ku waday.
Ciidanka NISA ee ku sugan isgoyska Danwadaagta ee degmada Wadajir ayaa la sheegayaa inay toogteen nin watay gaari kadib markii laga shakiyay inuu gaariga ku waday qarax.
Ninkaasi ayay ciidanka NISA ku amreen inuu joojiyo gaariga balse markii uu ka dhego adeegay ayay toogteen.
Dad goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ninka darawal ah oo waday gaari noociisu yahay HOMEY ama CAASI, lagu amray inuu joojiyo gaariga balse markii uu joogsan waayay isla goobta lagu toogtay.
“Walaaloow nin darawal ah oo waday gaari Caasi ah ayaa lagu toogtay isgoyska Danwadaagta oo ku dhaw garoonka Aadan Cadde, markii uu joogsan waayane waa la toogtay, hadana meydkiisa weli meesha ayuu yaallaa” Sidaas waxaa inoo sheegay mid ka mid ah dadkii goob-joogayaasha ahaa.
Dhinaca kale, warar madax banaan ayaa inoo xaqiijiyay in haatan wax qarax ah laga waayay gaariga, kadib markii ay gaarigaasi baareen ciidamada AMISOM, waxaana la xaqiijiyay in ninka darawalka ee la toogtay uu ahaa nin miskiin ah oo shaqeysanayay, bale ka cararay oo kaliya ciidamo lacago baad ah ka qaadi rabay.
Waa dhacdadii ugu horeeysay oo lagu dilo qof maskiin ah xilli uu ka cararaayay ciidanka Soomaaliyeed oo doonayay inay si xoog ah lacago baad ah uga qaadaan, waxaana dhacdadaan naxdin ka qaaday shacabka iyo ehellka ninka la dilay.